China steel core ucingo intambo mveliso kunye nabenzi | Bangyi
Intambo yentsimbi yentsimbi inxiba ngakumbi, ayimelani ne-extrusion, kwaye inobomi obuphezulu benkonzo kunentambo yefayibha yengcingo. Amandla okuphula aphezulu kakhulu kwaye ukuthamba kusezantsi. Intambo yesinyithi yocingo lwentambo iphezulu kunentambo yengcingo ye-hemp ngokungqinelana nobushushu obuphezulu. Iintsontelo zentsimbi ezisisiseko zentsimbi zikhethwa ngokubanzi kwiimeko ezinxibayo kunye nobushushu obuphezulu.
Ixabiso lentambo yentsimbi engaphezulu kwentambo iphakame kakhulu kunentambo yefayibha, kodwa ngokujonga ubomi benkonzo kunye nokuqina kwentambo yocingo kuya kuba ngcono, kungoko, iindleko zentsimbi yentsimbi engenazingcingo ziphantsi.
Intambo yethu yentsimbi esisangqa inezi zinto zilandelayo:
Intambo yocingo ihambisa umthwalo womgama omde.
2.Umthwalo wokuthwala umthwalo mkhulu, kwaye ukusetyenziswa kukhuselekile kwaye kuthembekile.
3. Ubunzima bokukhanya, kulula ukuwuthwala kunye nokuwuthutha.
4. Iyakwazi ukumelana nemithwalo eyahlukeneyo kunye nemithwalo eyahlukeneyo.
5. Inamandla aphezulu okuqina, ukudinwa kunye nefuthe lokuqina.
6. Phantsi kweemeko zokusebenza ngesantya esiphezulu, kuyanxiba, kuthintela ukungcangcazela, kuzinzile ekusebenzeni, kwaye kunokusetyenziselwa izixhobo ezichanekileyo.
7. Ukuxhathisa umhlwa, ukubanakho ukusebenza ngesiqhelo kwimeko erhabaxa yemithombo yeendaba eyahlukeneyo enobungozi.
8. ukuthamba Good.
Intambo yocingo ikwanokusetyenziswa ngokubanzi njengamalahle, ipetroleum, isinyithi, imichiza, ukwakha iinqanawa, iibhlorho, amandla ombane, irabha, ishishini lezomkhosi, ukhenketho, indawo yokugcina amanzi, ishishini lokukhanya kunye namanye amashishini.
Intambo yethu yocingo yentsimbi esisangqa iqhelekile ku-1 * 7/7 * 7/1 1 * 19/7 * 19, kwaye ubukhulu obuqhelekileyo bungu-1mm-10mm. Inokuveliswa ngokungqinelana nemigangatho yamazwe aphesheya neyangaphandle efana ne-ISO, BS, DIN, JIS, ABS, LR, njl.Ukuba uneemfuno ezizodwa, sinokuzenza ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.
Igama lemveliso Intambo yocingo kwalenza intsimbi
Izinto eziphathekayo Isinyithi seCarbon, 45 #, 55 #, 60 #, 70 #, njl.
Uluhlu lobubanzi 0.3mm - 12mm
Ulwakhiwo: 1X7, 1X19, 7x7, 7X19, 6X7 + FC, 6X19 + FC
Iimbonakalo Umphezulu ogudileyo, umhlwa ophezulu onganyangekiyo, ukudinwa okuphezulu, ukumelana nobushushu ngokugqwesileyo kwaye akhululekile ekuqhekekeni kweLateral / longitudinal, imingxunya nakwiimpawu njl
Ukupakisha: Iintsimbi ezomeleleyo zomthi, ukusonga ifilimu, iimfuno zabaThengi
Izicelo Le mveliso isetyenziselwa ukuphakamisa, ukutsala kunye nokunye ukusetyenziswa.
Ixesha lokuzisa: Iintsuku ezisi-7 ngetoni nganye, Ukuxoxisana
Egqithileyo Idiphu Hot intsimbi kwalenza ngentambo
Okulandelayo: Intambo yeplastikhi yocingo lwentsimbi
Intambo yecingo ye-Electro kwalenza intsimbi, Camera Camera Intambo, Intambo yocingo lwentsimbi ngesinyithi, PVC Camera Isefu Steel Intambo, China Ukwenziwa Isefu Wire Intambo, Intambo yocingo yePvc engenazingcingo,